Fepetra ankapobeny amin'ny paompy fanodinana menamena China Manufacturer
Description:Fitsipika ambony matevina,Kilalao fanontam-bolo natao manokana,Kilalao vita amin'ny mofomamy mikarantsana
Home > Products > Fanosoram-biriky > Fepetra ankapobeny amin&#39;ny paompy fanodinana menamena
Kitaposin'ny Glass pour politiquement sy fiomanana amin'ny faritra.
Abrasives Media blasting and shot blasting Media, Glass beads have spheres perfect with glossy, glossy surface, chemically inert, widely used in wet or dry method for prestressing shot peening, cleaning, trimming, finish finish, smooth and deburring processing in fields industrial aerospace, automotive, and electronics.
Ny fiarovan-tena dia nitifitra ny fiaramanidina, angady, kodiarana, fitaovana fanenomana, fantsom-batana, fiompy ary faritra marefo, propeller sy kambana, kitapo moto, jiro, valizy, spindles, sambo mba hampitombo ny fanoherana mekanika amin'ny reraka sy ny fikorontanan-tsaina ny ampahany.
Fitrandrahana metaly, plastika, glasy, hazo, sns ... mba hamokarana tanimbary vita amin'ny vita amin'ny satroka tsara tarehy.
Esory ny fihenan-drano avy amin'ny vatsa, ny rambony, ny fitoeran-drano, ny fitaovana, ny fiara, ny fanesorana ny loko efa antitra.
Fanadiovana ny fitaovana, ny faty, ny takelaka, ny baolina, ny pistons, ny bala, ny turbines lehibe ary ny fanodinana motera, ampahany sarotra.
Kitapo glas dia singa tsy simika, noho izany dia tsy misy ny tsy fahampian'ny taratra, ny fitsaboana post noho ny fanesorana ny fitifirana ny fandotoana dia tsy ilaina.
Fitsipika ambony matevina Kilalao fanontam-bolo natao manokana Kilalao vita amin'ny mofomamy mikarantsana Bibilao matevina Fitsipika Eglizy Eoropeana-Porofo matevina Sandam-be matevina Fitsipika fanenonan'ny brasilianiana Kitapo matevina lehibe